Okokugaya ufulawa isikulufa sokuhambisa Ezingxenyeni zikafulawa, izithuthuthu ezihambayo zivame ukusetshenziselwa ukuhambisa izinto. Yimishini yokudlulisa ethembele emijikelezweni ejikelezayo ukuze icindezele izinto ngobuningi ukunyakaza okuvundlile noma ukuhambisa okuthambekele. Uchungechunge lwe-TLSS ...Funda kabanzi »
I-FSFG series plansifter isetshenziswa kabanzi ezitshalweni zesimanje zokugaya ufulawa kanye nelayisi lokugaya amalayisi.Iyasetshenziswa kakhulu ekugayeni ukolweni nokuhlungwa kwempahla okuphakathi, kungasetshenziselwa nokuhlunga ufulawa. Idizayini ehlukile yokuqothula isebenza ngamaphaseji wokuhlunga ahlukene kanye naphakathi ...Funda kabanzi »
Esigayweni sefulawa, inqubo yokususa amatshe kukolweni ibizwa nge-de-stone. Amatshe amakhulu namancane anezinhlayiyana ezihlukile kunalawo kakolweni angasuswa ngezindlela ezilula zokuhlola, kuyilapho amanye amatshe anosayizi ofanayo nokolweni adinga ukuba ...Funda kabanzi »
Imboni yezokudla imboni yezinsika yomnotho kazwelonke waseChina, kanti imishini yokudla iyimboni enikezela ngemishini embonini yokudla. Ngokwenziwa ngcono kwezidingo zabantu zesiko lokudla kanye nokuchuma kwezindawo zokudlela, izindawo zokudlela kanye ne-othe ...Funda kabanzi »